Phenomena nke ihu igwe - Network Meteorology | Ihu Igwe Weebụ (Peeji nke 2)
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nhazi, njirimara na mmebi nke oke ikuku Fabien kpatara.
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka ihe oke ifufe na mpaghara ebe okpomọkụ ya na njirimara ya. Muta ihe banyere ya ebe a.
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka ụkọ mmiri ozuzo na atụmatụ ya. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe bụ oke ikuku ikuku na-eme na ụwa anyị na njirimara ha.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Hurricane Dorian na ihe butere ya. Muta ihe banyere ya ebe a.
N’isiokwu a anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara afọ n’adaghị ọkọchị na ihe na-akpata ya. Mụtakwuo banyere mmalite ya na nsonaazụ ya.
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka icicles, nguzobe ha na ọghọm dị egwu. Mụtakwuo ebe a.
N’isiokwu a anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ajọ ifufe Typhoon Hagibis na njirimara ya. Mụọ banyere ajọ ifufe kachasị ike
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere igwe ọkụ na njirimara ya. Mụtakwuo maka ihe omume a ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara squal Miguel na nhazi ya. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmekọrịta dị n'etiti ihu igwe na nfụkasị. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịkwa osisi na nsonaazụ ya na ụgbọ elu. Mụta banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Hurricane Lorenzo, mmalite ya na mmekọrịta nwere ike ịdị na mgbanwe ihu igwe.
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara oke mmiri ozuzo Gloria nke Spain tara ahụhụ na mbido afọ 2020. Mụta maka mbido ya na nsonazụ ya.
Anyị na-agwa gị n'ụzọ zuru ezu njirimara niile na mkpa nke oke ikuku Fujita. Mara ihe niile ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmiri ozuzo na njirimara ya. Muta ihe banyere udiri mmiri ozuzo a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke mmiri ozuzo Filomena, ihe kpatara ya na nsonaazụ ya. Mụtakwuo banyere snow snow nke narị afọ.
Muta ihe niile banyere iru mmiri ozuzo, nhazi ha na agwa ha. Anyị na-akọwa ya n'ụzọ zuru ezu ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihu ọkụ, njirimara ya na nhazi ya. Muta ihe banyere ya ebe a.
N’isiokwu a anyị na-akọwa etu uzuzu si malite, kedụ ihe ọ bụ na nsonazụ ya.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji mụta otu esi agbakọ larịị snow. Mụtakwuo ihe ị ga-atụle.
N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara fulgurite na njirimara ya. Mụtakwuo maka usoro a dị ịtụnanya.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara parhelion na njirimara ya. Mụtakwuo banyere ikuku a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara icing, njirimara ya na mmetụta ọ nwere. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke mmiri ozuzo na otu ọ si amalite. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị ụzarị dị iche iche dị na njirimara ha.
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe niile ị kwesiri ịma maka ihe oke ifufe nke ọkọchị na otu ha si adị. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị otu esi ebido mmiri ozuzo na nsonaazụ ọ nwere. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị njirimara niile nke ọgwụ na nsonaazụ ọ nwere. Muta ihe nile banyere oke onodu ubochi a.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị mmalite na akụkọ ifo Gris nke Ixion na 22º suno halo. Mara ihe niile ebe a.
N’isiokwu a anyị ga-egosi gị ụdị njirimara na mbido rissagas. Mụtakwuo banyere ihe omimi a.
N'isiokwu a anyị na-agwa gị ihe aka uwe bụ, otu esi akpụ ya na ihe nsonazụ ya bụ. Muta ihe banyere oke onodu ubochi a.
Rime bụ ihe omume gbasara ihu igwe nke na-ahapụ ọdịdị ala dị egwu. Mụta ebe a ka esi kpụọ yana ihe si malite.
Na nke a, anyị na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ntụgharị ihu igwe bụ na otu esi eme ya. Mụta otu esi metụta mmetọ.
Anyi na akowa etu osimiri nke si kpata oke esemokwu. Nke a bụ ihe ịtụnanya. Chọpụta ihe nzuzo ebe a.
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe njirimara ya bụ, etu esi akpụ ha yana ihe nsonaazụ mmiri ozuzo ahụ nwere. Muta ihe banyere ya ebe a.
N’isiokwu a anyị kọwara ihe Blob bụ na etu o si emetụta ndụ mmiri. Ọ ga-enwe nsonaazụ n'ọdịnihu? Chọpụta ya ebe a.
Na post a, ị ga-enwe ike ịmata ihe polar vortex bụ na mmetụta ọ nwere na ihu igwe nke mpaghara emetụta. Mụta banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ka ike nke ikuku ikuku na ikuku si arụ ọrụ. Mara ụdị igwe ikuku na otu ha si dị mkpa.
N'isiokwu a ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma zuru ezu banyere brontophobia: egwu nke àmụmà na égbè eluigwe. Banye ka esi amata ya.
Na post a ị nwere ike ịchọta ihe nzuzo nke egwurugwu ọkụ. Mara ihe kpatara ihe ịtụnanya a.
Ọ bụ ọkpọiso
Na meteorology a na-eji okwu ahụ emechiri emechi akọwa ọnọdụ ihu igwe. N’isiokwu a anyị kọwara ya nke ọma.
Anyị na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ihu oyi bụ na etu esi akpụ ya. Tinye ebe a iji mụta ihe niile gbasara njirimara ya na nsonaazụ ya. Echefula ya!
Banye ka ị gụọ isiokwu a ka ị mata ihe akụ́ mmiri igwe bụ etu esi akpụ ya. Mara ihe niile banyere ihe omimi igwe a na ihe nsonaazụ ya.
Mụọ maka echiche nke mgbanwe na ntụgharị ihu igwe na mkpa ha nwere. N'ebe a, anyị na-akọwara gị ihe niile.
Anyị na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ntu oyi bụ na otu esi akpụ ya. Banye ebe a ka ị mụta usoro ọzụzụ na nsonaazụ ọ nwere.
N’isiokwu a ị nwere ike ịchọta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịsa ahụ. Banye ma mụta ọdịiche dị na ya na ihe ndị ọzọ.
Muta ihe anwuru oku bu na otu o si di iche na onodu ubochi ndi ozo dika foogu na alulu. Mara ihe niile nke ọma.
N’isiokwu a anyị kọwara ihe alụlụ bụ na etu ọ dị iche n’igirigi. Tinye ebe a ịmatakwu banyere ya.
Na nke a, ị nwere ike ịmụta ihe oke ifufe bụ, njirimara ya, etu esi akpụ ya na ụdị ụdị ya. Egbula oge ịmatakwu.
N’isiokwu a anyị tụlere ihe ikuku mmiri bụ otu esi amalite na mmalite ya. Echefula echiche a na ihe omimi a.
Mụta ihe niile banyere sleet na edemede a. Anyi na akowa ihe n’eme k’ile ihe omuma banyere uzo a na otu o si n’enye otutu mmiri.
Banye ebe a mara ihe ihu igwe bụ na otu esi akpụ ya. Mụta banyere uru snowdrift bara n'oge.
Black ntu oyi
Black ntu oyi bụ ihe na-emebi emebi ihe ọkụkụ. Anyị na-agwa gị otu esi echekwa osisi gị. Tinye na-amụta ihe niile banyere nke a onu.
DANA (Idozi Ọnọdụ na Ọnọdụ Dị Elu) bụ ọnọdụ ikuku nke na-eme ka oyi na-atụ, ọ na-ejikwa ya nnukwu mmiri ozuzo. Mara ihe niile banyere ya.
Oge oyi na-eweta oke mmiri ozuzo na-ebute ọdachi na mbibi na obodo na obodo. Mụta ebe a etu esi akpụ ya na ihe kpatara ya.
Polar aurora bu ihe okike kwesiri ekwesi ihu n'anya nke gha achapu ndu. You chọrọ ịma ihe njirimara ya bụ na otu esi akpụ ya? Bata ugbu a.
Oké mmiri ozuzo na-adọrọ nnọọ mmasị ma na-enweghị atụ. Mụta ihe niile banyere ha ebe a.
Igwe apịtị ahụ bụ ihe gbasara ihu igwe na-eme na Spain n'oge ọkọchị na ọkọchị. Want chọrọ ịma ihe kpatara ya?
Mụta njirimara niile na usoro nhazi nke mgbawa cyclogenesis. You chọrọ ịma mmetụta ya na ihe na-akpata ya?
Anyị na-egosi gị oke ihe omume ihu igwe emeela na ụwa anyị na mmetụta ndị ha nwere. Want chọrọ ịma ha?
N'ebe a ị nwere ike ịchọpụta ihe ọ bụ, otu ebili mmiri na-etolite na nnukwu nsogbu ọ nwere ike inwe maka obodo na ugwu.
Edemede a na-ekwu maka nguzobe mmiri ozuzo na àmụmà na ihe njirimara ha. Want chọrọ ịmụtakwu banyere ya?
Edemede a na-ekwu maka njirimara na nguzobe nke Northern Lights na otu esi ahụta ọkụ Northern na Norway. Want chọrọ ịmụ banyere ya?
Idei mmiri bu ihe omuma nke puru ibibi nnukwu nsogbu na nsogbu nye mmadu. Ma kedụ ihe ha bụ, gịnịkwa bụ ihe kpatara ha? Tinye na anyị ga-agwa gị ihe niile.
Oké oyi na snowy hapụrụ ọkara nke mba Spain na snow na ice. Egbutuola ụzọ 60 yana ọtụtụ puku mmadụ ahapụla ike.
Cape Town enweghị mmiri n'ihi ụkọ mmiri ozuzo
Edemede a na-ekwu maka oke ọkọchị nke na-akụ Cape Town, nke na-akpata na ewepụtaghị ihe oriri, ike ga-agwụ ya site na Eprel 12.
Edemede a na-ekwu maka mgbanwe ndị ụmụ amaala chọrọ ka ha gbanwee National Hydrological Plan na mgbanwe ihu igwe.
N’ime ihe karịrị afọ iri abụọ, idei mmiri ga-abụ ihe gbasara ihu igwe nwere ike imetụta ihe karịrị nde mmadụ iri ise na ise.
Ozi a na - ekwu maka oke esemokwu dị n'etiti Sydney na United States. Want chọrọ ịma banyere ọnọdụ a?
Mgbasa ozi nke Mapama malitere iji buso unwu agha
Edemede a na-ekwu maka mkpọsa ịma ọkwa mmiri ozuzo nke Mapama malitere. Want chọrọ ịma ka mkpọsa a gbasara?
Na nke mbụ ya n’ime afọ iri atọ na itoolu snow dara na Sahara, n’obodo Ain Sefra (Algeria). Tinye ụtọ foto ndị a magburu onwe ha.
Edemede a na-egosi ọkwa mmiri mmiri na ọkwa mmiri Spanish maka ọnọdụ unwu. Want chọrọ ịmatakwu?
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, oke mmiri ozuzo emetụtala Mauritania, ebe enwerelarị ụmụaka 120.000 nwere nnukwu erighị ihe na-edozi ahụ.
Na nke a, ị ga - ahụ ọnọdụ nke ọdọ mmiri Spanish ma hụ oke oke ọkọchị anyị na - ata ahụhụ. Want chọrọ ịmatakwu?
Unwu ala Spain na-eche ihu bụ nke kachasị njọ n'afọ 20 gara aga. Ndị ọkwa dị ala karịa mgbe ọ bụla. Kedu ihe ị na-eme banyere ya?
Oké ifufe Ana rutere Spen
Oké ifufe 'Ana' bụ ihe omume meteorology nke metụrụ peninsula na Balearic Islands. Chọpụta mmebi ọ kpatara na ebe ọ na-aga.
Anyị na-akọwa ihe oke ifufe bụ, otu esi ahazi ya na ụdị dị iche iche dị iche iche ka ị nwee ike ịmụtakwu ihe gbasara ihu igwe a.
NASA emeela vidiyo na-adọrọ mmasị na-egosi isi ajọ ifufe, na etu ikuku siri buru nnu mmiri na ihe ndị ọzọ.
Na nso Greece na Sicily, oke mmiri ozuzo a na-akpọ Numa na-amalite, nke gburu mmadụ 15. Banye ịmatakwu.
Osimiri mmiri na Spain na-agwụ agwụ. Okpomọkụ dị elu na oke mmiri ozuzo na-emetụta mba ahụ dum.
6 nke oge ọkọchị 16 kachasị kpọrọ nkụ mere n'ime afọ iri gara aga
Otu nnyocha nke Mahadum Zagaroza na-ekpughe na 6 nke 16 oge ọkọchị kacha njọ mere na afọ 10 gara aga. Ọ bụ n'ihi mgbanwe ihu igwe?
Nụtụla banyere snow donuts? Banye ma choputa otu esi eme ihe omimi nke ihe omimi.
Typhoon Lan na-erute Japan
Oge 2017 Pacific nwere kpakpando ọhụrụ: Typhoon Lan. Ihe omuma a di ike na-abiaru Japan ebe o nwere ike imebi nnukwu ihe.
Ajọ ifufe Ophelia kụrụ Ireland taa na-agbasa ndekọ
Ajọ Ifufe Ophelia bịarutere Ireland taa wee bụrụ ajọ ifufe izizi mbụ rutere Europe na ndekọ.
Ophelia oke ifufe nwere ike rute Galicia
Ophelia, oke ikuku ohuru ohuru a kpụrụ na Atlantic, nwere ike ịgafe Galicia na ngwụsị izu. Anyị na-agwa gị ihe niile amaara ruo ugbu a.
O ruola afọ nke anọ akọrọ na National Park taa ahụhụ ma ụdị ndụ dị iche iche ọ na-akwado yana usoro obibi obibi na-emebi.
Oge ifufe nke afọ 2017 na-arụsi ọrụ ike: yana ajọ ifufe itoolu, ọ bụ nke kachasị njọ na ihe karịrị otu narị afọ.
Obi ịda mba na-eyi egwu ibibi Costa Rica, Nicaragua na Honduras
Anyị na-agwa gị banyere oke ịda mbà nke okpomọkụ nke malitere na October 4, 2017 na Caribbean, nke na-eme ka ndị Caribbean nọrọ na nche.
Dika nyocha ohuru nke dabere na onodu ojoo na oke amuma di elu, ekwesiri ighota ihe omuma El Niño.
Mmiri mmiri nke afọ a na-emechi 15% dị ala karịa afọ gara aga. Ọ na-e-atụle a nnọọ akọrọ oge nile Spain.
Heard nụla banyere ajọ ifufe nke mbara igwe? Ndị a bụ ihe ịtụnanya nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu maka ụwa. Chọpụta otú e si hazie ha.
Ihe ndi ozo di iche-iche di ndu di nkpa maka iguzogide nsogbu o bula nke gburugburu ebe obibi. Want chọrọ ịma ihe kpatara ya?
Anyị ahụla ezigbo ihe mmebi nwere ike ibute mgbe mbufịt na-eme. Anyị amatala etu esi kpụọ ha na ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịdọ aka ná ntị tsunami?
La Ni Laa onu
O nwekwara ihe di iche na El Niño nke amara dika La Niña. Ọ na-ewepụta mgbanwe dị mkpa na ihu igwe ụwa na nsonaazụ ya dị mkpa.
Ajọ ifufe Maria mebiri ọtụtụ ihe na Caribbean, ọkachasị na Puerto Rico na Virgin Islands, bụ nke lara n’iyi.
E bipụtara ọmụmụ ihe ahụ na akwụkwọ nyocha ihu igwe ma mụọ ihe ndekọ akụ mmiri igwe site na 1948 ruo 2015. Kedu nsonaazụ ndị ị nwetaworo?
. Oké ifufe nke kwụụrụ kpọmkwem n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri abụọ kacha ekwo ekwo n'ụwa siri ike karịa.
Ajọ ifufe Maria rutere ọkwa kachasị elu wee bibie agwaetiti Dominica
Anyị na-akọ banyere Hurricane Maria, nke na-eyi agwaetiti Caribbean egwu ụbọchị ole na ole mbibi Irma mechara.
Ihe ndị a bụ mmetụta nke mgbanwe ihu igwe nke na-echere anyị n'ọdịnihu, na-arịwanye elu ma na-akawanye njọ. Nke a ọ bụ ihu ihu kachasị njọ nke mgbanwe ihu igwe?
Ajọ ifufe María malitere dị ka ajọ ifufe mmiri, mana na Sọnde a ọ ghọrọ ajọ ifufe, na-edeba ifufe ihe ruru 120 km / h
Oke mmiri ozuzo María, nke ruru awa ole na ole ruru oke ifufe, na-eyi egwu mpaghara ndị metụtara oke ifufe Hurricane Irma
Typhoon Talim abatala na Japan, obodo nke oke mmiri ozuzo na oke ifufe na-echekwa ọkara ndịda ya anya.
Kedu otu oke ifufe nwere ike iweta ọtụtụ elele na mbara ala, ma rụọ ọrụ dị ka usoro na-achịkwa ihe niile site na okpomọkụ ruo gburugburu ebe obibi.
Agwaetiti Virgin Islands, nke ejiri ahịhịa na-ekpo ọkụ kpuchie ya, enwekwaghị acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ajọ ifufe Hurricane mebiri ya.
Ajọ Ifufe Irma dị n’etiti ụzọ ọ gafere na Florida. Ifufe ya adaala, a na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu. Doo n'azụ nnukwu mbibi
Ajọ Ifufe Irma, ugbu a oke ifufe emere na Atlantic Ocean, na-abịarute ebe ndị mmadụ buru ibu. Enwere ọkwa nke mkpọpụ ọtụtụ mmadụ.
Chọpụta ọdịiche dị n'etiti ajọ ifufe na oke ifufe, otu ha si etolite na njirimara nke ọ bụla. Kedu nke ka njo?
Ajọ ifufe ọhụrụ, nke e mere baptizim na aha Irma, na-aga Caribbean. Na-aga site n'oké ifufe nke ebe okpomọkụ na ajọ ifufe 3 Atiya n'otu ụbọchị.
N'ihi ụkọ mmiri na mmiri dị ala, ndị Mansillan nwere ike ịgagharị n'obodo ahụ apụtapụtara.
Ihe kpatara Harvey na oke idei mmiri ọ hapụrụ na mbilite ya. Enyemaka na ụzọ niile enyerelarị ịmegharị mpaghara ebe sara mbara
Enwere omumu ohuru n’egosiputa na ihe ndi ozo n’aru ala na ewe ogologo oge iji gbakee site na mmiri ozuzo ndi n’adighi nso karia nke ndi narị afo nke XNUMX.
A na-atụ anya ịda mbà n'obi Tropical Harvey iru n'ụsọ oké osimiri nke State of Texas dị ka ajọ ifufe na Fraịde a. E nyela ọkwa nyocha.
Ọnọdụ okpomọkụ dị elu nke na-eti izu a etinyewo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ahụ dum na nnukwu ihe egwu, n'ihi oke ihe egwu nke ọkụ.
Ghọta ihe dị iche na otu kpụ ọkụ n’ọnụ ma ọ bụ okpomoku si eme n’oge ọkọchị dị oke mkpa, iji kpuchido onwe anyị ma zere oke njọ.
Spain bụ otu n'ime mba ebe ebili mmiri na-arụ ọrụ karịa ma na-arịwanye elu ugboro ugboro. Kedu ihe anyị nwere ike ime banyere nke a?
You nụla banyere oke ebili mmiri? Banye ma anyi gha akowa ihe ha bu na otu esi amalite ihe omimi nke ihu igwe.
Ala ọmajiji abụọ siri ike mere na China na-erughị awa 24, tinyere ihe karịrị 120 aftershocks. Ndị ọrụ mberede na-aga n'ihu na-enyere mpaghara ndị ahụ aka.
Okpomọkụ nke na-eti Europe na ụbọchị ndị a, akpọrọ Lucifer, na-agbaze snow n’elu ugwu Alps Italy.
Tropical Storm Franklin, nke dakwasịrị mpaghara Yucatan, ga-eme ka ọdịda ala ọzọ, o yikarịrị ka ajọ ifufe.
Thebọchị ikpeazụ nke July na nke mbụ nke August na-ekpo ọkụ karịsịa n'àgwàetiti Mallorca, okpomọkụ dị ruo 41ºC.
Kedu ka anụmanụ si emetụta ma chebe onwe ha pụọ ​​na okpomọkụ?
Animaldị anụmanụ ọ bụla na-ata ahụhụ dị ukwuu na oke okpomọkụ. Mmeghachi omume ha nke metabolic na mmeputakwa ha metụtara.
Shanghai, China, atawo ahụhụ mmiri kacha njọ kemgbe ndekọ malitere, afọ 145 gara aga. Ọ jọgburu onwe ya nke na mmadụ anọ anwụọla.
Ikwenye na nkwekọrịta Paris agaghị egbochi ihe omume El Niño
Ọ bụrụgodi na ebumnuche nke nkwekọrịta Paris a, nke a agaghị eme ka El Niño kwụsie ike.
Na okpomoku dị elu karị, ịnwụ anwụ. Ọbụghị naanị n’ihi okpomoku n’onwe ya, kama ọ bụ n’ihi ịgbatị ya n’ụbọchị. Ọ na-ebute mbibi anụ ahụ na nke uche.
Gịnị bụ igwe na-ekpo ọkụ?
Kedu ihe bụ ikpo ọkụ na nsonaazụ ọ nwere? Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ihe niile gbasara ihe okike a, egbula oge ịbanye.
Anyị na-akọwa ihe ọhụụ El Ni Elo bụ, yana mmetụta ọ nwere. Na mgbakwunye, anyị ga-agwa gị ma ọ nwere njikọ ọ bụla na mgbanwe ihu igwe. Echefula ya.
Izu nke na-aga n'ihu akụkọ ihe mere eme okpomọkụ ndekọ na mba. Ma na ọkwa steeti na mpaghara dị iche iche.
Ọ bụ ihe ịtụnanya nke na - eme mgbe a manyere oke ikuku nke iru mmiri ịrịgo ugwu a.
HYPERCAN: Ajọ ifufe kachasị ike nke nwere ike ịdị!
Hypercan, ma ọ bụ otu oke ifufe dị egwu nke Akwụkwọ Nsọ nwere ike imebi ihu igwe. Ọ bụ ezie na enweghị ndekọ ọ bụla, amaara na otu ụbọchị ha nwere ike ime.
You chọrọ ịma ihe ajọ ifufe bụ? Anyị na-edozi obi abụọ gị banyere ihe omume nwere ike imebi nnukwu ihe ma buru ọtụtụ uru maka ndụ.
Enwere ndị Kenya nde atọ na ọkara chọrọ enyemaka enyemaka n'ihi oke ọkọchị na-egbu mba ahụ.
Anyị malitere oge ọkọchị site na ọdọ mmiri dị na 53% nke ike ha niile. Nke a kwekọrọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% n'okpuru ihe anyị nwere na 2007.
Ugbu a n'oge ọkọchị, site na mmụba nke okpomọkụ na mbelata mmiri ozuzo, oge ọkọchị na-amalite.
Oke ebili mmiri na-arịwanye elu n'ihi mgbanwe ihu igwe, mana ọ nweghị ihe a na-eme iji belata anwuru na-ebute ya.
Spain na-acha uhie uhie, ọ dịkarịa ala ruo Monday. Mmiri mbu na-etinye ógbè 34 anya, ebe a ga-eru okpomọkụ ruo 42 upC.
Ntughari. Ihe karịrị kilomita 160000 n'okporo ụzọ, iri puku kwuru iri nke igwefoto. Chad Cowan na-egosi ọdịdị dị egwu nke okike
Chọpụta ebe a bụ agba 7 nke egwurugwu. Olee otu eke egwurugwu si eme? Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara ihe a gbasara ihu igwe 🌈
Kedu ihe bụ ụwa ma ọ bụ ọkụ? Anyị na-edozi obi abụọ gị ka ị wee mara ihe karịa otu n'ime ihe ịtụnanya ihu igwe.
N'agbanyeghị nkwụsi ike nke afọ a 2017 na-enwe, WMO anaghị achịkwa 100% na El Niño ka nwere ike ịmalite
Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta nke ịrị elu na-arịwanye elu, mana mmụba a agaghị adị otu ebe niile.
Oge ajọ ifufe ahụ, agbanyeghị na ọ naghị amalite na eze rue June 1, enweelarị onye protagonist: 'Arlene', onye guzobere ụbọchị 40 tupu.
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na mpaghara Spanish nwere ike ibu karịa ndị a na-atụgharị uche na Hydrological Plans
Ajọ ifufe Katrina bụ otu n'ime ihe egwu kacha egbu egbu na nso nso a. O gburu mmadụ 1833, ma kpatara oke mbibi na United States.
Atụmatụ enyemaka maka ụkọ mmiri ozuzo na Bolivia
Oké ọkọchị ahụ na-eme na Bolivia bụ nke kachasị njọ n'ime afọ 25 gara aga. Kedu oru ndi di iji belata nsogbu nke unwu mmiri?
Na Somalia, ihe ruru mmadụ 196 nwụrụ site na ụnwụ ahụ metụtara na afọ a n'ihi enweghị mmiri na ọrịa.
Oké mmiri ozuzo bụ ihe ngosi okike dị ịtụnanya, mana ịmara ọdịiche dị n'etiti egbe eluigwe, àmụmà, na àmụmà? Tinye na anyị ga-enyere gị aka ịmata ha.
Ihe puru omume na onodu gburugburu ebe obibi na-anọpụ iche ga-aga n'ihu ọbụlagodi na ihe "La Niña" bụ pasent 70-85.
Oke ikuku ojoo ojoo dakwasiri Australia na egbu umu akuku Australia ka ha na arahu ura.
Otu foto na-agbasa kachasị na ịntanetị bụ nke nkịta oyi kpọnwụrụ nke achọtara na Osimiri Danube.
Ndị na-amụ gbasara ihu igwe na-eji ụfọdụ okwu anyị nwere ike ghara ịghọta nke ọma. Kedu okwu eji eme ihe n'oge oyi na gịnị kpatara anyị ji enwe mgbagwoju anya?
Kedu ụdị cyclon na ụdị dị iche iche? You ma ọdịiche dị n’etiti ikuku polar, a subtropical cyclone, na ajọ ifufe? lee, anyị kọwara ihe nzuzo ya niile
Ebili mmiri oyi nke Siberia nke anyị na-ahụ na-eru ebe kachasị elu na Spain. Ka anyị hụ nkọwa.
Mmiri oyi na Spain na-ahapụ snow na ọkwa dị ala, na-amalite n'oké osimiri. Kedu ihu igwe a na-atụ anya na ọ ga-abụ taa na echi? Anyị ga-agwa gị.
Oge oyi bụ ihe ịtụnanya na-eme ka okpomọkụ daa na 24 awa. Ma olee ebe ha si malite? Bata ma chọpụta.
Ebili mmiri na Spain: okpomọkụ dị n'okpuru efu na snow na ugwu na ugwu ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ
Ebili mmiri oyi na Spain na-edebanye aha okpomọkụ n'okpuru efu, na ntu oyi ruo -13ºC na ifufe siri ike nke ruru 80km / h.
Mmiri mmiri ozuzo na ifufe na-emetụta mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ dum nke Iberian Peninsula na Balearic Islands na-akpata ọtụtụ mbibi.
Anyị na-enyocha ọdachi kachasị njọ na-eme na 2016: ajọ ifufe, ala ọma jijiji na idei mmiri nke mebiri emebi.
Ihe egwu ide mmiri na-eme ka njọ site na mgbanwe nke mgbanwe ihu igwe. Ọ bụ ya mere gọọmentị ji eme mgbanwe na iwu.
Oge ajọ ifufe nke Atlantic 2016 bụ nke siri ike, na ajọ ifufe 7 nke ọtụtụ n'ime ha kpatara mbibi na ọnwụ.
N'iburu amụma ihu igwe mere ụbọchị ndị a, mpaghara mmiri iri na otu nke Spain dọrọ aka ná ntị site na oké mmiri ozuzo na oké ifufe.
Oké ifufe ahụ na Valencia abụghị naanị na mmiri hapụrụ okporo ụzọ, mana mmiri iyi egwu na-esokwa ya.
Ajọ ifufe Otto ruru Central America, ebe ọ hapụrụ 3 nwụrụ na Panama, na mgbakwunye na ihe karịrị 10 na-apụ apụ na nnukwu mmebi.
Kemgbe Fraịde gara aga, oke ajọ ifufe nke Argos hapụrụ ọkara ugwu nke United States na snow na ice.
Ga-achọ ịma ihe oke mmiri ozuzo kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme? Ọ bụrụ otu a, bata na lelee ogo ahụ.
Ọ bụ otu ihe kachasị njọ anyị nwere ike ịhụ n’elu ụwa, mana ịmara etu oke mbufịt si apụta? Bata ka anyi gwa gi.
Basicfọdụ ndụmọdụ dị mkpa ka ị ghara "dọta" ụzarị ahụ ma nwee ike ịga ebe ahụ ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ndị a anyị achọghị ịbụ onye protagonist.
Onu ogugu onu ogugu di iche iche nke onu ogugu ma obu ujo n'agbanyeghi ihe omuma nke ihu igwe. A na-akpọ ha phobias ihu igwe.
La Niña nwere ike ịbụ ezigbo ike na ọnwa ndị na-abịanụ
Achọpụtala na enwere ohere 50% na 65% na La Niña ga-adị ike n'oge nkeji iri na ise na ọnwa atọ mbụ nke 2017.
Nye na-ekpebi aha oké ifufe ahụ?
Nwetụla mgbe ị na-eche onye na-ekpebi aha oké ifufe na ihe mere eji akpọ ha? Tinye chọpụta ihe mere ha ji nwee aha ha.
Ugbu a Hurricane Matthew na-akụ ụfụ ikpeazụ, aga m aza ajụjụ banyere gịnị kpatara na ajọ ifufe adịghị na Spen.
Ha bụ ihe ịtụnanya nwere ike imebi nnukwu ihe, mana ọ bara ezigbo uru. Chọpụta ihe uru nke ifufe bụ.
Echefula nkọwa zuru ezu ma rịba ama ihe ndekọ 5 nke ajọ ifufe dị ka mbibi ma dị ize ndụ dịka Matthew siri gbari.
Ọ bụ ezie na ha yiri otu, e nwere ụdị mmiri ozuzo dị iche iche. Tinye chọpụta otú ha si dị iche na otu usoro a naghị ewere oke ebili mmiri.
Anyị ga-agwa gị otu oke ifufe si efe, ihe gbasara ihu igwe nke na-ekpuchi igwe ojii na igwe mmiri na-ewetakwa mmiri ozuzo.
Lezienụ anya na ndịiche dị n ’ụdị ihe ịtụ ama ama dịka ifufe, ajọ ikuku na ajọ ifufe.
E hibere Nicole ụnyaahụ, ajọ ifufe nke iri na anọ nke oge ajọ ifufe Atlantic nke, ruo ugbu a, emebibeghị.
Matthew Tropical Storm Matthew, nke hibere na Septemba 28, abụrụla ajọ ifufe nke Atọ 2, na-emetụta obere Antilles.
Oke mmiri ozuzo nwere ike ibilite na Spain?
Tornadoes bụ obere ihe na-adịghị ahụkebe na Spain, mana ozi ọma ahụ bụ na enwere ike nwee oke ifufe na Spain. Na-abanye.
Anyị na-agwa gị ihe ụkọ mmiri bụ, ihe omume nwere ike ịnwe nsonaazụ dị oke mkpa maka ndụ mpaghara niile emetụtara.
Dabere na nyocha ọhụụ, mgbanwe ihu igwe agaghị enwe mmetụta na oke ọkọchị karịa ka a tụrụ anya ya. Anyị na-agwa gị ihe kpatara ya.
Ugbu a ọ bụ oge ajọ ifufe na ajọ ifufe, aga m egosi gị ndị banyere n'akụkọ ihe mere eme n'afọ ndị na-adịbeghị anya maka ike mbibi ha.
Anyị na-enwe oke ikuku ọkụ na Spain n'oge a. Okpomọkụ nke ruru 42ºC nke na-egbochi anyị ịkwụsị oge ọkọchị kwesịrị. Maka gịnị bụ ihe a?
Mmiri ikuku kacha njọ na Spain
Ga - achọ ịma ihe ebili mmiri kachasị njọ na Spain? Banye iji chọpụta ụbọchị kachasị njọ n'oge ọkọchị nke mba ahụ nwetara.
Na Norway, ihe pụrụ iche emeela: ọkụ ọgbụgba egbuola ndị na-acha ọkụ 323 na Ogige Ntụrụndụ. Apụghị ikweta eziokwu? Banye ịmatakwu.
Hurricane Gastón, nke kachasị njọ n'oge ifufe Atlantic, na-adịwanye ike. Ọ ga-abata na Spen? Anyị ga-agwa gị.
Echefula ihe zuru ezu ma mara nke oma banyere njiri mara nke ihu igwe dika nke ele.
Typhoon Mindulle meriri Japan
Ajọ ifufe ajọ ifufe ahụ mebiri isi obodo Japan na ajọ ifufe nke ihe dị ka kilomita 180 kwa awa.
Ndị ọchịagha America na-awakpo New York City, ọ bụkwa na oke okpomọkụ na iru mmiri na-eme ka ụmụ ahụhụ a rụọ ọrụ.
Echefula nkọwa ma jiri nlezianya mara nke ịmata ihe 3 nke ị kwesịrị ịma banyere oke ugwu ugwu.
Kedu oge oge ifufe Atlantic ga-adị? Dị ka NOAA si kwuo, a na-atụ anya na ọ ga-arụ ọrụ karịa nkịtị. Banye ịmatakwu.
Banye iji chọpụta ihe si na La Niña pụta, na ebe ndị ọ kachasị emetụta. Echefula ya.
Ichere na ị maara ihe niile gbasara oke ikuku mmiri? Tinye na anyị ga-agwa gị 6 ịmata banyere ajọ ifufe nke ga-eju gị anya.
Mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri bụ ihe omimi nke ihu igwe nke na-esite n'oké osimiri. Tinye chọpụta otú ha si kpụrụ.
Rịba ama nke ọma ma echefula ihe kachasị njọ ọkụ nke Spain tara ahụhụ ma taa ahụhụ na akụkọ ntolite ya.
Yourgbọ ala gị ọ biliri jupụtara na unyi? Ọ na-abụkarị ihe ịtụnanya na - eme ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ. Chọpụta ihe kpatara mmiri ji apịtị.
Ọ ga-amasị gị ịhụ ụfọdụ ihe ngosi ihu igwe na-adịghị ahụkebe? Ọ bụrụ otu a, ị bia ebe kwesịrị gị. Bata maka ma juo gị anya.
Igwe mbu nke mbu ruru Spain niile na igwe ikuku oku emeela ka odi, na-eme ka okpomọkụ ju ogo 40.
Ha bụ otu n'ime ihe ndị kachasị dị ịtụnanya, mana anyị maara ihe niile gbasara ha? Tinye na anyị ga-agwa gị 4 ịmata banyere oke mmiri nke ga-eju gị anya.
Ugbu a Spain na-arịa oke okpomọkụ, ọ bụ ezigbo oge iji zaa ajụjụ banyere ihe kpatara ebili mmiri na-eme.
3 ịmata ihe banyere oké ifufe
Anyị na-agwa gị ihe atọ na-atọ ụtọ banyere oke ifufe, ihe ịtụnanya ihu igwe ndị a na-enwu gbaa na igwe na-amasị anyị nke ukwuu.
Oke ihe omuma nke ihu igwe bu nke, n'ihi ike ha, na-ebute ma obu nwee ike imebi onu ogugu ndi mmadu. Chọpụta ihe ha bụ.
Echefula ihe zuru ezu ma jiri nlezianya mara nke ihe dị ịtụnanya nke pink pink na-emekarị na mpaghara ụwa ụfọdụ.
You chọrọ ịma ihe Terral bụ, njirimara ahụ ikuku na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ? Tinye ka ịmara usoro nke ikuku ikuku nke Catabatic.
Kedu oge oge ifufe Atlantic ga-adị na 2016? Dị ka NOAA si kwuo, ọ nwere ike ịdị nro karịa ka ọ dị na mbụ. Banye ịmatakwu.
Ihe La Niña ga - eme n’afọ a ma amụma ahụ adịghị mma n’ihi na ọ ga - adị ka nsogbu El Niño.
Twobọchị abụọ gara aga, mpaghara Malaga dum tara ahụhụ ihe a na-akpọ obere-gale ihe a na-ahụkarị na mpaghara Cantabrian.
Oge ajọ ifufe na Atlantic ga-enwe nkezi ọrụ, yana ajọ ifufe ise, abụọ n'ime ha siri ike. Banye ịmatakwu.
You chọrọ ịma ihe hydrometeor bụ? Ọ bụrụ otu a, egbula oge ma banye. Anyị ga-agwakwa gị ụdị ndị bụ isi dịnụ. I bu ya ka ina aga idafu?
Kedu ihe bụ oke ebili mmiri na gịnị kpatara anyị ji echegbu onwe anyị?
Nụtụla banyere oke ebili mmiri? Aghọtaghị ha nke ọma na ihe egwu dị egwu, nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu. Na-abanye.
Oke ikuku na uzuzu bu oke ihe puru iche nke neme na ala anoghi na ala ndi akuku uwa nile, karie na Sahara.
Cielomoto, ala ọma jijiji na-eme na ikuku ma maka ya enweghị nkọwa ezi uche dị na ya. Chọpụta karịa gbasara igwe ihu igwe a
Ihe brinicle, nke a makwaara dị ka mkpịsị aka ma ọ bụ ogwe aka nke ọnwụ, bụ ajọ ifufe nke na-efe n'oké osimiri dị n'akụkụ okporo osisi ndị ahụ. Chọpụta otú o si kpụrụ.
Ike dị egwu nke El Niño »Godzilla»
El Niño bu ihe omuma nke meteorology nke metutara okpomoku nke Atlantic Ocean. Otú ọ dị, nke dị ugbu a ga-emebi ihe.
Chọpụta ebe kachasị mma gburugburu ụwa iji hụ ebe Ọwụwa Anyanwụ ma nwee ọmarịcha ihu igwe kachasị mma n'ụwa.
Saa mangrope yi fa asasewosow a esisi no ho. Mana gịnị kpatara usoro okike ndị a ji baa uru? Chọpụta.
Echefula nkọwa nke mba ndị dị na mbara ala na-ata ahụhụ ma na-ata ahụhụ nke kachasị ala na nke oge oyi dị oke egwu ma sie ike.
Oke ikuku oku di egwu ma obu ihe ojoo nke uwa. Lelee vidiyo nke ọmụmụ ya. Ọ ga-eju gị anya.
Enwere ike inwe oke ebili mmiri na Spain?
Ihe omume ndị a bụ ihe ngosi nke United States of America, mana enwere ike ịnwe oke ifufe na Spain. Banye ịmatakwu banyere ha.
Ọdachi ndị kasị bibie ụwa
Site n’oge ruo n’oge ihe okike na-egosi anyị ike ya, ike ya. Anyị na-agwa gị nke kachasị bụ ọdachi ndị na-emere onwe ha na ụwa.
Agbanyeghị na eziokwu karịrị akuko mgbe niile, egbula ihe nkiri 4 na-esonụ gbasara ọdachi ndị na-emere onwe gị nke ị nwere ike ịlele mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Kpoo vidio ndị a nke usoro 5 dị egwu F5. Lee otu ha si etolite, site na mbido ruo mgbe ha metụrụ aka. Na-abanye.
Spain na-enwe oké ifufe eletriki ugbu a na mmiri na akụ mmiri igwe. Leba anya n’otú ị ga-esi mee ma ọ bụrụ na mmiri adịghị ike.
Ajọ ifufe atọ nke Atọ kụrụ Oke Osimiri Pasifik n'otu oge ahụ, na-emepụta ihe ọhụụ na-enweghị atụ na akụkọ ihe mere eme n'oge niile.
Echefula nkọwa zuru oke ma chọpụta ihe omume 4 kachasị dị egwu na ọdịdị nke ga-eme ka ị nọrọ n'ọnụ gị.
Ogologo oge oke ọkụ na mba niile na-ata ahụhụ ọ bụghị naanị na ọ na-emetụta ndị mmadụ n'ụzọ na-adịghị mma, anụmanụ na-ata ahụhụ ma na-ata ahụhụ site na ya.
Spain nwere ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma ụbọchị ole na ole gara aga ya na oke mmiri ozuzo na àmụmà, mgbe ahụ m ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere ha.
Nke a bụ otu ihe kachasị njọ na ihu igwe, ebe ebili mmiri ya nwere ike tụọ ihe karịrị mita iri. Chọpụta otu tsunami bidoro.
Kedu ka esi akpọ oke ifufe, ifufe, na ihe ndị ọzọ gbasara ihu igwe
Echefula ihe zuru ezu ma rịba ama ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma etu esi ahọrọ aha oke ifufe, ifufe na ihe ndị ọzọ gbasara ihu igwe.
Saturdaybọchị Satọde gara aga enwere ala ọma jijiji na Nepal, nke nwere ike ịbụ akụkụ nke mmetụta domino nke na-akpụzi kọntinent India.
Lezienụ anya na ajụjụ ise na-esonụ nke ga - enyere gị aka ịghọta nke ọma ihe niile metụtara oke mgbawa nke ugwu Cabulco
Idei mmiri bu ihe omuma nke puru imebi ihe onwunwe na ndu mmadu. Ma gịnị bụ idei mmiri?
You nwetụla mgbe ị na-eche otú mmiri ozuzo si amalite? Ihe omimi a nke ihu igwe na-esonyere ya site na oke ikuku na ifufe.
Echefula nkowa nke otu esi eme ka igwe ojii wee malite, otu n'ime ihe omimi nke ihu igwe na ihe ojoo n'ihi enweghi visibiliti.
Anyanwụ atọ ahụ bụ ihe ọhụụ ihu igwe na-arụpụta site na ngwa anya nke ọkụ na-ewepụta ozugbo ọ dabara na kristal ice nke igwe ojii.
Ọkụ San Telmo bụ ihe a na - adịghị ahụkebe, mana nke na - adọrọ mmasị ọtụtụ, ebe ọ bụ plasma na - anaghị ere ọkụ.
Ala ọma jijiji bụ ihe ikuku na-eme na mbara igwe na-apụtakarị na akụkọ. Ma gịnị bụ ala ọma jijiji na otu esi atụ ya?
Red mmiri ozuzo bụ ihe dị ịtụnanya na ịtụnanya ihu igwe, nke mere na ọbụlagodi taa enwere ndị nyocha na-eche ihe ọ bụ kpọmkwem.
Tornadoes bụ ihe gbasara ihu igwe nke nwere ike ibibi. Mba nke kachasị emetụta ha bụ United States, nwere ihe karịrị otu puku tonado kwa afọ.
Ole ọdịda tụrụ na osisi waks
Ọnụọgụ nke mmiri ozuzo a tụrụ na wax nke ahịhịa ala emeela ka a mata oke ọnọdụ ihu igwe nke ọtụtụ puku afọ gara aga, na-agbatịwanye ọmụmụ ihe na-adịghị mma banyere usoro ihe atụ na ndekọ fosil.
Anthropocene, mmadu okwesiri "ikwe" oge nke ala nke aka ya?
Nnukwu mmetụta nke ihe a kpọrọ mmadụ nwere na mbara ala na gburugburu ya na-akpata mkpochapụ na ọbụna ịgbanwe usoro okike na ihu igwe na-eme ka o kwe omume ịmụ ihe na-agbakwunye ihe a na-akpọ Anthropocene na mbara ala ụwa.
Mụ amaala nke ebe dịka Verkhoyansk, Yakutsk ma ọ bụ Oymyakon (ha abụọ nọ na Russia) bi ndụ dị iche na nke anyị, opekata mpe n'oge oyi. Dị ka ihe atụ, ndị ọkwọ ụgbọala n’obodo ndị a na-ahapụ ụgbọala ha dọwara adọwa n’ebe a na-adọba ụgbọala ruo ọtụtụ awa mgbe ha na-azụ ahịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ, mgbe mgbe ha na-eme ka mmanụ a na-ete mmanụ n’ọkụ ụgbọala ha dị ọkụ iji fụchaa ya.
N'akụkọ ihe mere eme nile, ajọ ifufe enwetawo aha dị iche iche. Nhazi ha agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ ruo mgbe ha ruru usoro ndepụta.
Ndagwurugwu nke ugwu na-agbọpụ ọkụ n'àgwàetiti La Palma ga-eme ka mbufịt tsunami nke gafere Atlantic
Nchịkọta foto, nke e mere na United States, nke na-enyere anyị aka ịghọta otú ndị ahụ metụtara meriri ngafe nke oke ifufe.
Ihe karịrị ọkara narị afọ nke nyocha na ọ ka bụ ihe omimi mere nkume ji agagharị naanị na ndagwurugwu Ọnwụ California.
Egwurugwu a na-agbanwe agbanwe bụ ọnọdụ ihu igwe nke chọrọ ọnọdụ dị iche iche karịa egwurugwu nkịtị. Ebe dị n’ụwa ebe a na-ahụkarị ha bụ Ugwu Ugwu, ọ bụ ezie na mgbanwe ihu igwe ga-eme ka ha mee ebe ndị ọzọ nwere ọnọdụ.
Foto nke mbibi nke Hurricane Andrew kpatara (nke ruru otu kachasị elu, 5) na 1992 na mpaghara Miami na ndịda Louisiana.